Fiaraha-misakafon’ny Bilaogera Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2017 3:14 GMT
(Marihina fa tamin'ny 20 Novambra 2005 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Faly aho namonjy ny Fihaonan'ny Bilaogera Toniziana Andiany Faha 8 ny zoma alina, niaraka tamin'ireo mpandray anjara namana ao amin'ny WSIS, Jeff Ooi avy any Malezia sy Isam Bayazidi avy any Jordania. Taorian'ny ireo andro maromaro nandreraka, tena nahafinaritra tokoa ny nampiato kely ny fivoriana ary niresaka momba ny famahanana bilaogy sy nankafy ny fiarahana tamin'ny tsirairay. Ny bilaogera mpivady, ny mpandray anjara ao amin'ny Global Voices Mohamed Marwen Meddah (MMM) antsoina ihany koa hoe “Subzero Blue” sy ny vadiny tsara tarehy sady mahafinaritra izay manana anarana bilaogy hoe ” Aquacool ” no nitarika ny fotoana. Maro amin'ireo bilaogera any Tonizia no manoratra amin'ny teny Frantsay sy Arabo, fa tsy amin'ny teny Anglisy, kanefa ny ankamaroan'izy ireo kosa dia miteny Anglisy tsara (ny fiteniny fahatelo) ary tena nafana tokoa ny resaka nifanaovanay.
Niresaka betsaka momba ny firongatry ny famahanana bilaogy ao amin'ny tontolo Arabo izahay, sy ny fieritreretana fa tonga ny fotoana ho an'ny “Feo Arabo” mba hanampiana ny fifandraisan'ny fifampiresahana izay misy amin'ny tontolon'ny bilaogy any amin'ireo firenena samihafa. Nanamarika i Isam fa sarotra ho an'ny bilaogera ao amin'ny firenena iray ny mamantatra hoe iza ireo bilaogera tsara ao amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina aminy, ary fotoana izao hamoronana sehatra ho an'ny vondrom-piarahamonina bilaogera Arabo rehetra. Tena hevitra tsara izany ho ahy.
Tena zava-manokana tokoa ny nihaona tamin'i Jeff Ooi. Sondriana tanteraka ireo rehetra teo an-databatra ary nientanentana ny olona rehefa nitantara ny fandrahonana sy ny fisamborana azy tamin'ny herintaona i Jeff, taorian'ny namoahan'ny olona iray fanehoan-kevitra tsy mitonona anarana sy manohitra ny finoana Islamo tao amin'ny bilaoginy. Ao amin'ny tontolo Arabo, matetika ireo bilaogera no mizara olana mitovy tahaka izany. Nafana ny resadresaka rehefa nifanakalo traikefa sy fomba fijery ny olona momba ny fomba handanjalanjan'ny olona iray ny faniriana hiteny malalaka manoloana ny tsindry ara-politika sy ara-pivavahana isankarazany.
Tena namelombelona ny faniriako ho any amin'ny Fihaonamben'ny Global Voices manaraka, any Londra amin'ny 10 Desambra ilay fisakafoanana hariva.